Doorka geotechnologies ee sameynta 3D Cadastre - Geofumadas
Doorka jototechnology ee is-beddelka caddaynta 3D
Disember, 2018 cadastre, Baridda CAD / GIS
Khamiista Nofeembar November 29, sida Geofumadas oo ay la socdaan 297 ka qaybqaatayaasha waxaan ka qaybgalay webinar UNIGIS mawduuca: "Doorka jototechnology ee is-beddelka caddaynta 3D»Waxaa qoray Diego Erba, oo sharraxay xiriirka muhiimka ah ee ka dhexeeya cilmiga geotechnologies iyo 3D cadastre. Maqaalka waxaa daboolay Lau, oo ah wada-shaqeyn Geofumadas ah, oo aan galabta dib u eegnay dareenkeeda, natiijooyinka iyo waliba dib-u-eegista mawduuca sababtoo ah UNIGIS Waxa uu ku dhejiyay kuwa ku waayay.
Dhageysiga Erba waxay u baahan tahay maskax furan oo ku wajahan aragtida degdegga ah ee waddammada horumaray, iyo aragti-dhexdhexaad ah ee waddamada ay bayaankaan Cadastre 2034 uusan matalin baqdin laga qabo waxa la qaban karo; laakiin halkii ay ku lug lahaan lahayd maaraynta isbeddelka, go'aan gaarista iyo saamaynta dhaqaale ee macnaha guud ee deynta natiijooyinka laga leeyahay muwaadinka ay sarreyso marka la eego bixinta adeegyo ka wanaagsan kuwa ku saleysan xogta dhuleed. La-hawlgalahayga, Lau wuxuu aad ugu xeel-dheeraa soo koobidda waxyaabaha ku jira Webinar; Faallooyinkaygu waxay u muuqdaan inay yihiin tifaftiraha Geofumadas.com oo bunni ah.
Webinar waxaa loo sameeyey iyada oo ku saleysan mawduuca buugga FIG-Xeeladaha ugu Fiican 3D KadastresOo isna wuxuu bilaabay sharxaya, sida 3D Qaabaynta hagaajin kartaa dalkii sidii ay u ku lug a kacaanka farsamada xoog leh oo bixiya fursado meelaha bandhigo technology in kor horumarinta, waxan oo dhan aydnaan oo dhan sifooyinka ka data 2D (maps, gooldhalinta, maps).
Erba, waxa uu carrabka ku adkeeyay in hababka ururinta xogta ay tahay in la fududeeyo barnaamijyada bilaashka ah sida Iskuday, taas oo ah codsi qaab-dhismeed oo loo sameeyey si loo qabsado xogta iyo macluumaadkani waxaa lagu kaydiyaa webka, isaga oo ka dhigaya isticmaalka warqad sida habka aruurinta.
Loolan aad u weyn, oo ku saabsan go'aan qaadayaasha. Dabcan, marka laga eego dhinaca tacliinta iyo aragtida waa hab sax ah. Si kastaba ha noqotee, markaan aragno khibrado sida Multipurpose Cadastre of Colombia, halkaas oo Trimble ay la timid dhulkeeda cajiibka ah ee Land Folio iyo PenMap, waxaan ku soo gabagabeyneynaa isku xirnaanta iyo xitaa korantada xasilloon ee meelaha miyiga ah inay weli tahay caqabad fog. Kaydinta websaydhku wali waxay ku sii jiri doontaa nooc isku dhafan oo u dhexeeya goosashada, isku duubnaanta, iyo xitaa warqad.
Habka loo tixgeliyo waa iyada oo la tixgelinayo in inkasta oo in technology aan weli ku jiraan xaalad kala guur ah oo u dhexeeya bandhigay 3D iyo hawlgal 5D, magaalooyinka waaweyn ee Latin America waa in degdeg loogu baahan yahay in ay qaataan farsamooyin dunida ugu horreeya, waxay noqon doonaan ficillo wanaagsan oo loogu talagalay waddooyinka magaalooyinka caqli badan.
Waxa uu intaas ku tilmaamay in ay tahay in aan bilaaban ka fikirka ku saabsan 3D Tusaale fiican ma aha oo kaliya by kacaanka farsamada, laakiin xaqiiqada dhabta ah ee meel dalabaadka ah, iyada oo taasi waxaa suurtagal ah in Tusaale wanaagsan oo dhaqdhaqaaqa da'ayeen-dhismaha. Iyada oo tusaale, waxaad arki kari lahaa doorka 3D Qaabaynta in ay dhacdo xun sida dhulgariir iyo xisaabin kari barakaca ee dhismayaasha la eego dhulka iyo dhulka barakaca marka la eego qaab-dhismeedka.
Waxa uu sidoo kale muujisay cilmiga sayniska sameeyay dunida oo dhan tan iyo 2011 ku kor isticmaalka 3D Qaabaynta for falanqaynta bannaan, marka lagu daro ugu Yeedha dhagaystayaasha in horumarinta mashaariicda la xiriira arrintan gaar ahaan Latin America.
Si loo fahmo technology ee ku lug leh 3D Tusaale, sida inay dalka, waxaa lagama maarmaan ah in aan ka jawaabo su'aasha ah ee sida guri waxaa ka diiwaan gashan 3D?, Iyagoo og inay unugga markii hore ee la xidhiidha isticmaalka dhulka geesoolayaasha mar walba, sida aad iska diiwaan gelin kartaa guri in faa'iidooyinka 3D iyo waxa ay leeyihiin iyagu ma ay heli la cadastre dhaqanka.
Well, marka hore adeegsiga tiknolojiyada 3D loo isticmaali karaa si ay u maareeyaan meelaha, ie, ka dhigi sharaxaada qaabka, mugga iyo goobta, iyo noocyada dusha halkaas oo uu ku yaal.
Isticmaalka Satlaytaka fog casriga ah waxaa suurto gal ah in lagu soo qabto Muga sare ee data, oo ay ku jiraan jiilka xogta, sida dhibcood daruur ama daruur dhibic, lagama maarmaanka u ah dhisidda walxaha 3D eryi horumarinta database-da'ayeen.
Joomatics-ka waddammada soo koraya waa inay qaataan hababkan oo kale, kuwaas oo, sidaan kor ku sheegayba, ay yihiin kuwo aragti dheer oo aan dib looga noqon karin. Markay waxyaabahani rumoobaan, waxaa muhiim ah in lagu adkeysto geeddi-socodka; maxaa yeelay inkasta oo aaladaha qabashada ay horumareen, howlaha software-ka loogu talagalay wax ka bedeliddooda, iyadoo la xakameynayo macaamil ganacsi iyo marin isdaba joog ah oo ku saabsan macluumaadka hore ayaa xadidan. Haddii qaadashada heerka 'ISO-19152' ay wali tahay caqabad adag, inta udhaxeysa hoos u dhigida qaabka fikradda ah ee qaabka jir ahaaneed, oo leh fasallo jaangooyooyin ku saleysan barta barta ah keydinta metadata; Waa in la qiyaaso haddii aan dooneyno inaan u tagno qaabeynta saddex-geesoodka ah (ma ahan muuqaal, ama qabasho, laakiin maamulka la xakameeyo).
Waxaan u maleynayaa in dhibaatadu aysan aheyn qaadashada aragtiyo cusub. Dhammaan hay'adaha waxay leeyihiin takhasus gaar ah oo bani'aadamnimo, gaar ahaan arrimaha falanqaynta macluumaadka iyo horumarinta farsamada; laakiin dhibaatadu waxay ku jirtaa isku xidhka howlaha adeegayaasha ee aan kaliya diirada saareynin wejiga helitaanka xogta, laakiin sidoo kale u baahan in la maamulo xaqiiqadan cusub ee xogta, dabeecada iyo shuruudaha u qalmida hay'adaha kale ee isticmaali doona macluumaadka, qaababka cusbooneysiinta hoos timaadda macaamilka macaamil ganacsi, iyo sidoo kale habka loo wajahayo barashada casharrada jilayaasha ka qaybqaadan doona bixinta adeegyada muwaaddinka
Kuwa naga mid ah ee hirgaliyay habab isku dhafan oo udhaxeeya Cadastre iyo Registry, waxay ogyihiin caqabada maareynta isbedelka ee ku lug leh u qalmida diiwaan hayaha, si aan u aragno khariidad ka mid ah daawadeyaasha websaydhka, oo aan lahayn meelaha u dhow ee lagu sharaxay qoraal ahaan, sida ay yihiin lagu arki karo qeexida farsamo ee firfircoon ee khariidada cadastral iyo, taas oo sidoo kale ka tarjumeysa xayiraadaha ka imanaya qawaaniinta nidaamka gaarka ah ee ka imanaya sharciga dhulka. Hadda qiyaasi in halkii aad ka heli lahayd diyaaradda 2D ay tahay inaad aragto mesh saddex-geesood ah oo leh dhismooyin kala bar dhalaalay dadaalka ugu fiican ee Drone2Map ama ContextCapture.
In lagacna aad la taabtay in ka hor inta hadlo fulinta 3D khariidaynta dunida oo dhan, waxaa lagama maarmaan ah in aad dalbato farsamooyinka ku habboon in ay curiyaan lagu daydo ee matalaadda bannaan, sida ay yihiin geoid ah, sida kuwaas oo loo baahan yahay in la dhiso iyo taageero moodooyinka lagu habeeyey xaqiiqada xaddiga ah. Dhismaha noocaan ah ee dalal badan ayaa ah ficil ahaan, taas oo ah dhibaato aad u daran markaad tixgelinayso nooca shaxanka sawirka, aad u sareeya.
Qeybta sharciga waa lagama saari karo, adigoo ogaanaya in cadawtarku sidan oo kale ku lug leeyahay jawiga dhaqaale iyo dhaqanka dabiiciga ah. Iyadoo ku xiran qaab sharci ah oo la xidhiidha dhul magaalo kasta, sida ay dhismeedka iyo goobaha loola dhaqmo waxaa ka go'an, wuxuu kala hadlay kiiska Colombia-Brazil, halkaas oo ay jiraan sale ah xaq u of meelaha dhismaha aan dhisay (aagga cas) .
Sidaas waxa isticmaali 3D ee dalka, iyo sidoo kale xogta mugga jira, sidoo kale jiri doona waxtar leh waxa ay u yeedheen seminar web sida "xaaladaha noqnoqashada", in uu yahay, si ay u xaliyaan dhibaatooyinka la xidhiidha xayiraad, Isgoysmo toosan (dhismayaasha la xiriira) ama kaabayaasha (tuubooyinka, fiilooyinka, qasabadaha ama sugnan).
Laga bilaabo laba goobood:
Qaadashada: taasi waa, waxa jira, waxa jira, halka ay tahay sida ay u egtahay.
Abuuritaanka: Abuuri xogta tiknoolajiyadda sida BIM, oo dhalinaysa moodeelka 3D, taas oo markaa ka gudbi doonta hannaanka ra'yiga ah ee siinaya shayga muuqaalka uu leeyahay xaqiiqda.
Waa maxay naxariistu mar kale ku adkaysato; ma jiri doonto maamulka maareynta dhulka, laakiin marxaladaha danbe ee cusbooneysiinta iyo isku dhafka adeegyada ee ku lug leh jilayaasha ku xiran silsiladda wareegta.
Inta lagu guda jiro bandhiga, Erba tusay tusaale u ah sida ay u la isticmaalay daydo 3D of qaarkood dhismeedka adeega aasaasiga ah, sidaas oo tilmaamaysa in lagu daydo, kuwaas oo u taagan yihiin qalab loogu talagalay go'aan qaadashada, tan iyo markii ay qayb ka mid ah waxa ka jira waa, in uu yahay, aragto in ay jirto, meesha ay jirto iyo sida ay tahay, tani waxay noqon kartaa meesha laga bilaabo simitaanada isticmaala xogta noocan ah si looga hortago nooc kasta oo ah mid togan ama mid xun.
Fikirka xajmiga cadawga ayaa markaa loo bedelayaa sheyga, ka mid noqoshada fikrada VoxeL, wax la mid ah sida laydhka pixel, laakiin shayga 3D, "waa qaybta ugu yar ee lagu shaqeyn karo ee qaabka saddex geesoodka ah". Fikradda dhaqaalaha 3D ee dhaqaalaha ayaa sidoo kale la soo bandhigay, taas oo ka mid ah wadiiqada ama Qiimeeynta Sanaadiiqda, taas oo ka dhigaysa jilicsanaan taas oo hantida lagu meeleeyo meel gaar ah, si loo go'aamiyo sifooyinka qaarkood sida waafaqsan qaab-dhismeedkiisa iyo xiriirka ay la leeyihiin degaanka ku dhow.
Maxaa ku dhici kara Nidaamyada Macluumaadka Juqraafiyeed, iyo dhammaan jawiga nidaamyada loo sameeyay falanqaynta meelaha? Tilmaan inay tahay dhammaadka xogta vektorka sida la og yahay, taasi waa, waa "Dhammaadka garabka" waa saldhig u ah ururada xogta la xidhiidha cadawga", Taas oo tusinaysa habka loo heli karo, loo dhisay loona falanqeeyay waa in la tixgeliyaa.
Oo ay ku jiraan muuqaalaynta iyo xogta 3D khalkhalgelinta ma aha ee xaqiiqada ka fog, codsiyada sida ArcGIS Pro ESRI, DigitalTwins Bentley Systems ayaa waxaa ka mid ahaa in ay functionalities interface in loo eego xogta, kuwaas oo, QGIS ayaa sidoo kale ka mid yihiin dar-ons ka qabashada xogta dhibcood, sidaas darteed waxay soo saartaa wax aan la garanayn sida waxa ku dhici doona GIS-da caadiga ah iyo codsiyada kale ee falanqaynta meelaha, maaddaama cusbooneysiintu ay tahay inay la jaanqaado horumarka farsamada ee soo socota, waxaan arki doonnaa dhowr sano, haddii ay jiraan wax ka beddelka barnaamijyada bilaashka ah ee u oggolow hawlo kala duwan oo loogu talagalay wax ka qabashada xogta 3D.
Su'aasha waa in aan waydiiyo ayaa ah in dalalka nagu shaqada gacanta ee gacanta ku horumarka tignoolojiyada, horumarinta SmartCities xaqiiqo ah in uu yahay oo kaliya hareeraha derbiga geeskiisii, wuxuuna u baahan yahay dadaal intaa ka badan ee is-dhexgalka farsamada, ka Qaabaynta 3D inay xiriir la dareemayaal badan oo jira, oo lagu daray fikirka ah IoT - Internet waxyaalaha, iyo gudbinta xogta daruurtii marayo, waa waxa baddala magaalada iyo dalka, iyaga oo keentay in ahaada magaalooyin smart iyo dalka smart.
lagacna aad Tani waxa ay ahayd arrin xiiso leh, ka fiirsaneysa inay muhiimadda ay leedahay BIM-Qaabaynta 3D- xogta ee daruur-dareemayaal for ad-injineernimada, iyo sidoo kale kuwa u guurayso maaraynta macluumaadka sida.
Dhankeyga, xushmad aan u hayo Diego Erba, wacdigiisa daal la'aanta ah ee aragtida ka baxsan isla markiiba. Waxa aan laga odhan kulaylkeeda iyo firfircoonidiisa gaarka ah ee muujinta mawduucyada sigaar cabbin ee qaabka ugu fiican ee suurtogalka ah ee dadka.
UNIGIS, iyada oo aan ka ahayn dalabkan aan la aqbali karin Shahaadada Master's Degree ee Nidaamka Macluumaadka JuqraafiMareegaha internet-ka waxaad ku taageereysaa sameynta bulsho u hamuun qabta waxyaabaha ku kordhinaya qiimaha qaybta. In kasta oo tirooyinku qabow yihiin, haddana 95 reer Kolombiya ah, 37 Argentine ah, 35 reer Mexico ah iyo 33 Ecuadorians ah ayaa metelay saddex meelood laba ka mid ah wadarta ka qaybgalayaasha webinarkan.
Si aad u sugto midka xigta.
Miyaadan ka qaybgeli #Webinar ee # UNIGIS la leh Diego Erba? Halkan waa link oo leh rikoorka gaaban si aad u aragto # diiwaanka: https://attendee.gotowebinar.com/register/7579969785221365507
Post Next Leica Airborne CityMapper - xalka xiisaha leh ee khariidaynta magaaladaNext »